मुम्बईमा भएको रेल दुर्घटनामा १५ को मृत्यु, २ वर्षमा रेल दुर्घटनामा परी ५० हजारको मृत्यु - A complete Nepali news portal based on news & views
३ श्रावण २०७६, शुक्रबार २३:३२ July 19, 2019 Nonstop Khabar
मुम्बई । भारतको मुम्बईमा रेल दुर्घटनामा परी १५ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरी अधिकारीहरुले शुक्रबार दिएको जानकारीअनुसार पैदल यात्रीले बाटो काट्ने वा रेलमा झुण्डिएर यात्रा गर्ने क्रममा रेलबाट झरेर दुर्घटना भएको हो ।
बिहीबार भएको घटनामा परी अरु कम्तीमा १३ जना घाइते भएको प्रहरी प्रवक्ता एस. आर. गान्धीले बताउनुभयो । भारतको आर्थिक राजधानी मानिने मुम्बईमा सजिलोका लागि सबैतिरबाट बाटो काट्ने गरेकाले धेरै दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ । “मुम्बईका अत्यधिक धेरै मान्छे छोटो बाटो प्रयोग गर्न चाहन्छन्,” गान्धीले भने ।
मुम्बईमा दैनिक ७५ लाख यात्रुले रेल सेवा प्रयोग गर्छन् । यो सङ्ख्या अत्यधिक धेरै भएकाले रेलमा धेरै भीड गराउने गरेको छ । मुम्बईको रेल सेवा उपनिवेशकालीन हो । रेल सञ्जालअन्तर्गत हुने दुर्घटनाका कारण भारतमा औसतमा दैनिक दश जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । उनीहरुमध्ये अधिकांशको रेलमा हुने भीडभाड र बाटो पार गर्ने क्रममा मृत्यु हुने गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ देखि २०१७ सम्ममा भारतमा रेल दुर्घटनामा परी करीब ५० हजार जनाको मृत्यु भएको छ ।
आय आर्जनमा सम्लग्न हुने सबैले प्यान नम्बर लिनु अब अनिवार्य